Nagu saabsan - Xerada Arcadia & Alaabada Dibadda Co., Ltd.
Xerada Arcadia & Dibadda Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005, Kaas oo ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista Teendhooyinka Trailer, Teendhooyinka saqafka, Aishings, teendhooyinka Bell, teendhooyinka Shiraac, Teendhooyinka Kaamamka, iyo wixii la mid ah. Badeecadeenu waxay u dhoofisay in ka badan 30 dal iyo gobol sida Mareykanka, Ingiriiska, Australia, New Zealand, Norway, Europe, America iyo Koonfur-bari Aasiya. iwm
Ka dib ku dhowaad 20 sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo, Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. waxay noqotay soo saaraha teendhada hormuudka u ah Shiinaha ee leh "Arcadia" astaanta dibadda.
iyada oo kooxdeena farsamada 8, soo dhaweyn amarrada OEM iyo ODM, Kadibna waxaan sameyn karnaa sida sawirkaaga, muunad. Ka sokow, waxaan haynaa kooxdayada iibinta xirfadleyda ah, oo leh 6 iibiyeyaal, 2 iibka kadib iyo 2 shaqaalaha taageerada iibka ee ka caawiya diyaarinta dhoofinta iyo dukumiintiyada. Ujeeddadeennu waa in aan siino adeegyo xirfadle ah, waqti ku habboon oo wax dhisaya.
Xakamaynta tayada ka soo iibsashada alaabta, ka dibna inta lagu guda jiro soosaarka .Marka amarku dhammaado, waxaan dejin doonnaa kumbuyuutar kasta oo aan mid mid u kormeeri doonnaa, si aan u hubinno in qof walbaa uu tayo wanaagsan yahay ka hor inta aan la keenin.
Teendhada Gawaarida: dabaqa jilicsan (7ft, 9ft, 12ft), dabaqa adag (gadaal gadaal, laab hore)
Teendhada Sare ee Saqafka: Taambuugga saqafka sare, Jilibka adag ee Shell Saqafka Sare, Shimbiraha
Teendhada Dawan: 3m, 4m, 5m, 6m, 7m
Teendhada Kalluumeysiga: lakabka keliya, qaabka kuleylka
1. Waxaan leenahay koox farsamo yaqaan ah, shaybaarada iyo sawirada waa la habeyn karaa
2. Warshad gaar ah oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 80 shaqaale, xirfad iyo khibrad leh
3. Kormeerka tayada adag si loo hubiyo 100% uqalma
4. Waxyaalo kala duwan oo dhar ah ayaa daboolaya qiimaha iyo tayada looga baahan yahay macaamiisha kala duwan
5. MOQ yar
6. Ka jawaab celin karaa 12 saacadood gudahood